Apple waxay bilaabi kartaa Apple Watch oo xiriir la leh LTE | War gadget
Apple ayaa bilaabi kara a Apple Watch ayaa ka madax banaan iPhone-ka. Qaabka hadda jira wuxuu u baahan yahay inuu si joogto ah ugu xirnaado smartphone ka Apple si aad u hesho ogeysiisyada; awood u yeelan kartaa inaad ka raadiso goobaha khariidadaha ama xakameyso qaybta muusikada. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay faallooyinka BloombergDhamaadka sanadka, dhaqdhaqaaqa Apple wuxuu diirada saari doonaa bilaabida saacad casri ah oo leh xiriir LTE ah.
Sidan oo kale, waxay ka faalloodaan, liistada liiska ayaa lagala soo bixi karaa Spotify - tusaale ahaan - ama farriimaha waxaa lagu diri karaa WhatsApp iyada oo aan jir ahaan lahayn iPhone waqtigaas. Si kale haddii loo dhigo, kala duwanaanshaha fursadaha ayaa xoogaa kor u kacaya.
Sidoo kale, Intel sidoo kale wuxuu soo galay riwaayaddan, mid ka mid ah soosaarayaasha oo aad u xiiseynayay inuu galo suuqa xiran ee qalabka mobilada ee Cupertino. Sida muuqata, sida laga soo xigtay ilo ka socda bogga iyo Mark Gurman, Intel wuxuu siin doonaa guntinta qalab isku dhafan si ay uga dhigto midkan Apple Watch mid dhab ah. Taasina waa in Intel horeyba ugu jirtay kombuyuutarrada Apple laakiin waxaa ka maqnaa inay qayb ka noqoto waaxda faa iidooyinka ugu badan u keenta shirkadda uu aasaasay Steve Jobs.
Dhanka kale, Apple waxay wadahadallo kula jirtaa shirkadaha mobilada kala duwan - gacmaha ayey xoqi doonaan - si loo arko cidda awood u siin doonta noocyadan saacadda casriga ah. Si kastaba ha noqotee, sida muuqata waxaa jiri doona dhowr qof oo xiiseynaya in qalabkan cusub laga dhex helo safkooda. Y Dalka Mareykanka, magacyada sida AT&T, Verizon, Sprint ama T-Mobile horey ayey uga gudbeen; Wadahadalada sidoo kale waxay ka socdaan Yurub laakiin ma jiraan wax magacyo ah oo la shaaciyay xilligan.
Laakiin fekerka labaad, ciyaarta ayaa sii dheereyn karta. Waana in sameynta Apple Watch ay ka madax bannaanaato moobiilka oo kaligiis shaqeyn kara, wuxuu ka dhigi karaa dad badan oo xiisaynaya xiran karo. Waxaan ula jeedaa Haddii iibsashada taleefanka gacanta cusub uusan ka xirnayn smartwatch, iibku wuu ka sii ballaadhan karaa oo ay bilaabaan inay fuulaan jagooyinka qaybta xiran karo halkaa Xiaomi waa boqoradda muran la'aan hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Apple waxay bilaabi kartaa Apple Watch oo leh LTE
Samsung Galaxy Note 8 ayaa suuqa soo gali doonta 15ka Sebtember
Boeing ayaa sawir gacmeed ka sameysay diyaarad inta ay ku jirtay duulimaad tijaabo ah